Makambani Matatu Akasarudzwa kuTechPoint Mira Mipiro! | Martech Zone
Makambani matatu andiri kunyatsoenderana nawo akasarudzwa sevokupedzisira Miraira yeIndia yeMiraira:
ExactTarget - hapana mubvunzo nekukura kwayo uye nehutungamiriri hunoshamisa kuti iyi kambani ichave inokodzera kugamuchira mubairo. Kune zvidimbu zveExpactTarget's system iyo inongorerutsa mitemo yefizikiki kuti ingakurumidza sei kugadzira uye kutumira maemail. Ini ndaida iyo 2 nehafu makore andakashandira ExactTarget!
NeMuvhuro, ndakave nemufaro wekumira ndichikurukura na Scott Dorsey, Mutungamiri weExpactTarget, uye zvakaita sekuti ndakanga ndisina kumbobvira ndasiya. Aive nesimba, aine tariro, uye aigara achinyemwerera. Kuti akatora nguva kundiona ndicho chipupuriro chakadai kugadzirwa kweshamwari uye chipangamazano.
Nenzvimbo yangu nyowani kuPatronpath, ini ndichiri kutanga kushanda neExactTarget zvishoma. Kana tangozara zvizere nemumwe wevatengi vedu, tichava neAccactTarget's hombe Enterprise account kumusoro uye kumhanya. Nezve account iyoyo, ExactTarget yakagadzira chirevo chedu kuitira kuti titumire maemail pachinzvimbo chevamiriri venharaunda uye nekupa vamiririri mushumo wezvaidiwa nevatengi vavo zvichibva pakutsvaga kwavo.
Zvakanaka kuva nevakomana vechikwata chekare kuExactTarget futi, sezvo vachigamuchira mhinduro yangu. Kuve maneja wechigadzirwa ipapo uyezve kudzokera kumashure kune chinzvimbo chemutengi chinhu chakakosha kwazvo. (Ndinoshuva dai ndaikwanisa kutenga zvandinoda ndisati ndazvirasa!)
Isu zvakare tine Agency account ine ExactTarget uye tine simba, otomatiki kusangana kwemaresitorendi. Pahusiku hwehusiku, pasina kudyidzana kubva kuresitorendi tinotumira chero gumi kana gumi mushandirapamwe - zuva rekuzvarwa, mhemberero, hapana kudyidzana kwemazuva X, kutenga zvakapfuura X madhora, nezvimwe. Iyo yakanaka yekuchengetedza mashandiro emaresitorendi.
Uye, ndichishanda ne2012 Super Bowl Committee, ndiri kugadzira a WordPress plugin Zvekushandisa zvakachinjika kubva kuWordPress blog kuburikidza neExpactTarget. Zviri makumi masere muzana% izvozvi - ndiri kungoshanda pakuedza kugadzirisa iyo cron they basa.
Kuumbiridza Blogware - Chris Baggott paakanga achiri kuExpactTarget, isu takatanga kuona mukana wekublogi mafomu ekunyatsobatanidza zvirimo uye nekupa kunongedza kuri nani kweKutsvaga Injini Kugonesa.
Nemwanakomana wangu kutanga paIUPUI, ini ndaisakwanisa kuzviisa panjodzi yekukwira pabhodhi Compendium pakabvunza Chris. Inogona kunge iri imwe yezvikanganiso zvangu zvikuru. Nehasha yakawanda uye kunyangwe godo diki, ndaifanira kugara ndichiona Chris naAli Sales vachitora Compendium kumusika! Ongorora: Ali Sales yaive zvakare inobatsira muExpactTarget uye ChaCha yekutanga nhoroondo ... ChaCha inosarudzwawo!
Ini ndinodada nekuve ndiri mune iwo chaiwo ekutanga eMugovera Starbucks misangano uko isu takagadzira bhizinesi kesi, hazvo!
Heino hurukuro yekutanga ye Chris achitaura nezveCompendium:
Kugadziriswa kuri kuita yechipiri kutenderera kwemari izvozvi uye kuri kukura nekukurumidza zvakanyanya. Iko kusanganiswa kweinjini dzekutsvaga uye kugona kwekuvandudza maitiro emakambani ekushandisa mabloggi ari kupisa izvozvi uye Compendium iri pamberi. Ndakamira naChris masvondo mashoma apfuura ndikamukanda mamwe mazano akati wandei nezvechigadzirwa chake.
Chris anga ari chipangamazano mukuru kwandiri uye Ali anga ari anokurudzira Mutungamiri ... ivo vaita yangu yega yeArhente vhezheni yandichange ndichivhura munguva pfupi. Kana iwe uchifarira Compendium, ndapota batana neni zvakananga uye ndinogona kukuzivisa iwe, “Wadii kungoshandisa [Blogger, WordPress, Typepad, nezvimwewo]. Kana iwe unogona kusaina kuCompendium's Newsletter (asi ive shuwa kundiisa mune rejista!) uye kuhwina yemahara iPod Kubata.
Patronpath - Kushambadzira uye Ecommerce yeiyo Indasitiri yeRestaurant - chekupedzisira asi chisiri chidiki ndiye wandinoshandira iyezvino. Patronpath irikukura katatu-manhamba kukura izvozvi. Sezvo maresitorendi achida kusvina wallets avo nekuda kwekuwedzera kwemitengo uye kudzikisira nhamba dzekudyira, nzira chete yekukudza bhizinesi ravo kuwana rakasimba kutora kana kuburitsa bhizinesi.
Kurongeka kwepamhepo kwakura vamwe vevatengi vedu zvakananga kunze kweyetsvuku uye kune yakasviba. Kunyangwe yedu yepakati, isu tinobhadhara yakawanda yekutarisisa kuona vatengi vedu vachishandisa yakanaka yekutsvaga injini optimization uye yakakura saiti kuvandudza. Izvo hazvina kukwana kuve nepamhepo kuraira, iwe unofanirwa kutsvaga iko online kuodha - poindi iyo yakawanda yemakwikwi edu yatadza.
Mumwedzi misere yekupedzisira isu takabatanidza mana akasiyana POS masisitimu, akasimba callcenter kusanganisa, takagadzirisa chimiro chedu kudzikisa kusiyiwa kwemitero uye nekushandisa turnkey yenyika tsamba tsamba tsamba yemumwe wedu vatinoshanda navo (ataurwa pamusoro apa muExpactTarget Enterprise yekushandisa). Mune kumwe kuratidzwa kwetsandanyama yedu, ketani hombe yakakumbira chimiro cheedu masystem atakaisa pamusoro pevhiki imwe chete. Icho chinhu chimwe chete chakange chatora makwikwi mwedzi kuti ikure. Tine zvakawanda zvakawanda mukusimudzira izvozvi uye tiri kuenda muna8 nemabharani ari kupisa!
Patronpath iri kukura zvine hukasha uye ndiri kuita zvehasha kusundira otomatiki uye (munguva pfupi iri kutevera) ndichimisikidza mamiriro enzvimbo yakagadziridzwa muBluelock kuenderera. Tine ance wekusimudzira mudyandigere akateedzera mamwe emakambani makuru ecommerce pasirese (epasi rese) uye ndine chivimbo chekuti panosvika 2009, tichava simba guru muindastiri. Icho chokwadi ndechekuti isu tinoziva mashandiro anoshanda, mashandiro ecommerce, uye mashandiro emaresitorendi - uye makwikwi haaite.
Isu tango wedzerawo Marty Shiri kune yakasanganiswa. Ini ndinofunga Marty akadhonza 60% yebasa rangu rebasa kubva pandiri zuva raakapinda pamusuwo uye wanga uri mufaro unoshamisa kushanda naye. Kuenderera kwake kwekutyaira kwekuvandudza uye zano ndizvo chaizvo zvatinoda panguva ino muPatronpath!
Ongorora: Ziva iyo Patronpath saiti - isu tine itsva iri kuuya mwedzi uno!
Ndinofanira kuwedzera kuti handisi ini chete hukama pakati pemakambani matatu aya. Iwe unozoona kuti kambani yega yega ine yakasarudzika yekumaka - nekuda kwaKristian Andersen uye timu. Kristian mukomana anoshamisa uye anomhanyisa yakanakisa kambani iyo inokwanisa kuendesa seisina imwe agency kana consultancy yandakamboshanda nayo. Kristian anobatsira makambani madiki kuti akure, uye akaunganidza timu inoshamisa muno kuti izviite. Ishamwari yakanaka futi.
Tags: kumakakushambadzira kushamwaridzanafacebook kushambadziralas vegasmiloonline conferencepew kutsvagisamazanodiki indianakutanga kwevhikitechmakersbasa